Ukugcinwa Kwezindlu Nokurekhoda Ukugcina Imisebenzi Yabafundisi
Kwabafundisi Amathiphu namasu
ImiSebenzi Yokunakekela Abafundisi
Ukugcinwa Kwezindlu Nokugcinwa Kwezincwadi Kwabefundisi
Umsebenzi wokufundisa ungahlukaniswa ngemisebenzi eyisithupha yokufundisa . Enye yale misebenzi iphathelene nokugcinwa kwezindlu nokugcinwa kwerekhodi. Usuku ngalunye, othisha kumele banakekele ibhizinisi lokufundisa ngaphambi kokuba baqale uhlelo lwabo lwesifundo nsuku zonke. Ngenkathi imisebenzi edingekayo yansuku zonke ingase ibonakale iyingqayizivele futhi ngezinye izikhathi engadingekile, ingahle iphathwe ngendlela yokuphatha ngokusebenzisa izinhlelo eziphumelelayo. Imisebenzi enkulu yokugcina indlu nokugcinwa kwemininingwane ingahlukaniswa ngezigaba ezilandelayo:
Ukuqoqa Umsebenzi Wabafundi
Ukuphathwa Kwemithombo Nezindaba
ImiSebenzi eyengeziwe yokuLondoloza okuPhezulu koMfundisi
Kunemisebenzi emibili yokugcina imisebenzi ehlobene nokuya khona: ukuthatha ukuhamba nsuku zonke kanye nokusebenzisana nabafundi abahamba isikhathi eside. Kubaluleke kakhulu ukuthi ugcine amarekhodi ahambela kahle ngoba isimo singase siphumelele ukuthi ukuphatha kudingeke ukuba kusebenzise lokhu ukucacisa ukuthi ubani owake wangena ekilasini lakho noma engekho ngosuku oluthile. Ukulandela ngamanye amathiphu ayisihluthulelo okumele ukhumbule uma ubamba khona:
Ukusetshenziswa kwabokuqala ekuqaleni konyaka ukufunda amagama abafundi.
Uma unabafundi beqedela ukufudumala ekuqaleni kwenkathi ngayinye yesigaba, lokhu kuzokunika isikhathi sokuhamba ngokushesha futhi ngokuthula ngaphandle kokuphazamisa ukufunda.
Izihlalo ezibekiwe zingasheshisa ukuhambela ngoba ungakwazi ukubheka ngokushesha ekilasini ukuze ubone ukuthi zikhona izihlalo ezingenalutho.
Amathiphu Okuthatha Ukufika
Amathenda angabangela ukuphazanyiswa okukhulu koothisha. Kubalulekile ukuthi ube nesimiso esilungele futhi ulinde lapho umfundi ephuthumayo ekilasini lakho. Ezinye izindlela eziphumelelayo othisha abazisebenzisayo ekubhekaneni nama-tardies zihlanganisa:
Funda kabanzi mayelana nalezi zindlela nezinye izindlela zokubhekana nabafundi abathintekayo ngalesi sihloko ngokudala inqubomgomo ye-Tardy
Ukumisa, Ukuqoqa, Nokubuyisela Umsebenzi Wabafundi
Umsebenzi wabafundi ungashesha ngokushesha ibhaluni ukuze kube yinkinga yokugcina indlu uma ungenayo indlela elula futhi ehlelekile yokwabela, ukuyiqoqa, nokuyibuyisela. Ukubeka umsebenzi womfundi kulula kakhulu uma usebenzisa indlela efanayo nsuku zonke. Izindlela zingase zihlanganise ishidi lesabelo nsuku zonke elithunyelwe noma lisakazwa kubafundi noma indawo egcinwe ebhodini lapho uthumela isabelo sosuku ngalunye.
Abanye othisha benza umsebenzi wokuqoqa uqedile ekilasini isikhathi sangempela se-waster ngaphandle kokuqaphela. Musa ukuhamba ekamelweni lokuqoqa umsebenzi ngaphandle uma lokhu kusebenza ngenjongo enkulu njengesikhathi sokuhlolwa noma ukuyeka isimo sokukopela . Esikhundleni salokho, baqeqesha abafundi ukuba benze okufanayo njalo lapho beqedela umsebenzi wabo. Isibonelo, ungase ubenze baphendule iphepha labo futhi uma wonke umuntu eseqedile adlulisela umsebenzi wakhe ngaphambili.
Ukuqoqa umsebenzi wesikole kufanele kwenziwe ekuqaleni kwekilasi ukuvimbela abafundi ekuqedeni umsebenzi wabo ngemuva kwensimbi. Ungase uhlale emnyango bese uqoqa umsebenzi wabo njengoba bengena ekilasini noma banomsebenzi othize wesikole lapho kufanele baqale umsebenzi wabo ngesikhathi esithile.
Ukuqoqa Amathiphu Nezikhwama zasekhaya
Ukuhamba kwesikhathi futhi Yenza Umsebenzi
Enye yamathuna amakhulu kunawo othisha abaningi abasha nabanolwazi ukubhekana nokusebenza kwesikhathi sekwephuzile.
Njengomthetho ojwayelekile, othisha kufanele bathole umsebenzi wekwephuzile ngokwemigomo ebekiwe. Ukwakhiwa kwinkambiso kuyisistimu yokwenza umsebenzi wephuzile ukuphuthuma ukuze ube nobulungisa kulabo abaphendulela umsebenzi wabo ngesikhathi.
Izinkinga ziphakama mayelana nendlela yokugcina ithrekhi yomsebenzi owedlule futhi uqinisekise ukuthi amamaki alungiswe kahle. Uthisha ngamunye unayo ifilosofi yakhe ngokusebenza kwesikhathi sekwephuzile nakuba isikole sakho singase sibe nenqubomgomo evamile. Noma kunjalo, noma iyiphi indlela oyisebenzisayo kufanele ibe lula ukuba ulandele.
Yenza umsebenzi isimo esihlukile ngokuphelele. Unenkinga yokudala umsebenzi othembekile futhi othakazelisayo nsuku zonke okungenzeka ungahumushi kalula emsebenzini wokwenza. Ngokuvamile umsebenzi wekhwalithi udinga ukusebenzisana okuningi kothisha. Ungathola ukuthi ukwenza umsebenzi usebenze ngomfundi, kufanele udale izabelo ezihlukile noma unikeze iziyalezo ezibhalwe ngokuningiliziwe.
Ngaphezu kwalokho, laba bafundi basuke benesikhathi esengeziwe sokuvula umsebenzi wabo ongaba nzima ngokuphatha ukufaka kwakho.
Indlela Yokubhekana Nesikhathi Esizayo Nokwenza Umsebenzi
Njengomfundisi, ungaba nezincwadi, amakhompiyutha, izincwadi zokusebenzela, izinkampani zomsebenzi, amareythri labhalabhu, nokunye okuzokwazi ukuphatha. Amabhuku nezinsimbi zithandwa "ukuhamba" ngokuvamile. Kuwukuhlakanipha ukudala izindawo ekamelweni lakho lapho izinto zihamba khona kanye nezinhlelo ukwenza kube lula kuwe ukuthi uhlole ukuthi zonke izinto zibalwe usuku ngalunye. Ngaphezu kwalokho, uma ubeka amabhuku, cishe uzofuna ukwenza njalo "ukuhlola amabhuku" ukuze uqinisekise ukuthi abafundi banamabhuku abo. Lokhu kuzosindisa isikhathi nemibhalo eyengeziwe ekupheleni konyaka wesikole.
Omunye wemisebenzi yokugcina ukurekhoda abafundisi abanayo ukubika ngokunembile amamaki. Ngokujwayelekile, othisha kufanele babike amamaki ku-management yabo izikhathi ezimbalwa ngonyaka: ngesikhathi sokubika esithuthukisiwe, sokudluliselwa kwabafundi, kanye ne-semester namamaki okugcina.
Isihluthulelo sokwenza lo msebenzi ulawulwe ukuhambisana nokufakwa kwakho njengoba unyaka uqhubeka. Kungaba nzima ngezinye izikhathi ukukala izabelo zokuchitha isikhathi. Ngakho-ke, kuwumqondo omuhle ukusebenzisa ama-rubrics futhi uma kunokwenzeka ukukhipha izabelo ezidinga isikhathi esiningi sokubamba. Inkinga eyodwa ngokulinda kuze kube sekupheleni kwesikhathi sokubamba ukuqedela ukufaka ukuthi abafundi bangase "bamangele" ngebanga labo - abazange babone noma yimiphi umsebenzi owenziwe ngaphambilini.
Isikole ngasinye siyoba nesistimu ehlukile yokubala amamaki.
Qiniseka ukuthi kabili hlola ibanga lomfundi ngamunye ngaphambi kokugcina ukuzithoba ngoba amaphutha kulula kakhulu ukulungisa ngaphambi kokuthunyelwa.
Ukudala nokusebenzisa amaRubrics
Amathiphu Wokunquma Isikhathi Sokwabiwa Kwesabelo
ImiSebenzi Yokugcinwa Kwamanye engeziwe
Ngezikhathi ezithile, kungase kuvele imisebenzi engaphezulu yokugcina irekhodi kuwe. Isibonelo, uma uthatha abafundi bakho ohambweni lwezinsimu, kuzodingeka uqoqe ngokuphumelelayo imishini yokusindisa imali nemali kanye nokuhlelwa kwamabhasi kanye nabathinteli. Uma lezi zimo ziphakama, kungcono ukucabanga ngalunye lwezinyathelo bese uvela nesistimu yokubhekana namaphepha.
Amathiphu Ohambo Lensimu
Inqubo Yokubhala Yokubhala Inkqubo Yokubhala
Ukuthatha Ukufika Kwansuku zonke
Izinhloko Eziphezulu Zokuba Nguthisha Ophumelelayo
Izindlela Zokuletha Indaba Yesihloko
Incazelo yokuphathwa kwamakilasi
Ulimi LwaseSonto LwaseValentine: Ukufunda Ngezakhiwo, Imidwebo Nemifanekiso
Okuhlangenwe nakho kwami ​​Okuhle Kakhulu
Iziphi Izakhiwo ZaseKlasini Ezisebenza Kakhulu?
Isabelo se-Biography: Imigomo Yabafundi kanye neRubric Yokubhala
Ukudumisa okuphumelelayo ekilasini
Yini Okushiwo Okuphezulu Okushiwo 40?
Ama-radio Frequencies e-US for Vehicle Controled Vehicles
I-Antique ne-Tin Toys Ukwaziswa kwama-Price / Value
I-University of Mississippi i-GPA, i-SAT ne-ACT Data
I-Top 10 Rock Song Remixes
I-Florida Tech GPA, i-SAT ne-ACT Data
15 Swimsuits Ehlekayo Eqinakalayo Ukuguqula Izintambo E-Pool Le Summer
'Thanda Umakhelwane Wakho Njengoba Uzithanda Wena' Ivesi leBhayibheli
Ivesi leBhayibheli mayelana nokwamukela uKristu
I-Order of Worksheets Worksheet - Neziphakamiso - Azikho Abaxhasi (Ama-Worksheet 6)
Biography kaDkt. Bernard Harris, Jr.
Umlando Omfushane weMorocco
Izizathu Eziyisihlanu Akuyona Inhlekelele Emgwaqeni Omusha "we-Batman v. Superman"
Imibuzo yemibuzo yokuhlolwa yama-Percent
Imibuzo evamile yokuxoxisana eMfundweni
I-University of Tampa GPA, i-SAT ne-ACT Data
Imiphakathi kanye nama-Ecosystems
Umuntu Ugcina Umfazi Ofile Esigodini Ithebula Lekhofi!
Ingabe Kufanele Ucebe Ukuba Umongameli?
I-Fontbonne University Admissions
I-American Revolution: Impi yaseSullivan's Island
Indlela Yokuzihlanganisa "Umcabango" (ukugxila)
Izindawo 8 Zokuvakashela e-Italy Uma Ufuna Ukuzijwayeza IsiNtaliyane